[Ukubulala amagciwane kusivakashi ngasinye] Ama-ping angama-55, isitayela sase-Japan I-Tokyo idyllic TOTO Ithoyilethi elihlakaniphile likaMongameli we-Presidential suite lingapheka izithabathaba zasekhaya - I-Airbnb
[Ukubulala amagciwane kusivakashi ngasinye] Ama-ping angama-55, isitayela sase-Japan I-Tokyo idyllic TOTO Ithoyilethi elihlakaniphile likaMongameli we-Presidential suite lingapheka izithabathaba zasekhaya
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Sophia
U-Sophia unokuphawula okungu-23 kwezinye izindawo.
[Umoya waseJapan opholile futhi opholile]
Lapho mina owawucabanga kuleli gumbi, ingqondo yami wethule lolu look nenhle sikubeke, okuyinto efana Kyoto Ihhotela ngiye ngahlala e Tokyo, Japan izikhathi eziningi. It has eqinile Japanese izici kazwelonke, umhlobiso nenhle futhi fresh, nokuningi Nge umuzwa onamandla we-geometry, umnyango wokhuni ekuqaleni wenziwa ngaphandle kwe-tatami ekamelweni.Kamuva, ecabanga ukuthi umnyango wokhuni ufanelekile kakhulu endlini yokugezela, igumbi lokulala lashintshwa libe yisitayela esivulekile ngokugcwele.
Izindlu zesitayela samaJapane ngokuvamile zisebenzisa izinto zokhuni zemvelo ekuhlobiseni nasekuhlobiseni igumbi, futhi azibuzisi ukunethezeka noma ubukhazikhazi Ngakho-ke, ngikhetha uphahla lwamapulangwe emvelo futhi ngenze izindonga ze-TV, ezinombuso ojulile ofana neZen.
Ekukhetheni indlu yangasese, ngisebenzise indlu yangasese ehlakaniphile ye-TOTO enomuzwa wonyawo, ehambisana nomgqomo kadoti ohlakaniphile ukuthuthukisa umuzwa wokunethezeka endlini yonke.
Indawo ye-mini bar iyalelwe ngokukhethekileyo ukuthi ivumele abantu abasha ukuthi baphuze futhi baxoxe lapho bengajabulela khona impilo yasebusuku. Isitayela sama-Japanese kufanele silungiselelwe i-sake newayini 🍶 Kukhona nezingilazi zewayini ezibomvu nezingilazi ze-Champagne ekamelweni... efana aphuza itiye Friends of ungase futhi hlala bay iwindi futhi iwashi movie ngenkathi enza itiye (-55 intshi Mi TV)
Isitsha se-ceramic eluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe ngenhla kwekhawunta sisetshenziswa endlini yokugezela eneshawa yethusi ehlanzekile ye-retro ukwenza umbala uvumelane.
Uma ngiphuma ngiyohlala, umatilasi uyinto ebaluleke kakhulu. Ukunethezeka komatilasi nakho kuyinto engiyikhathalela kakhulu. Ngakho-ke, ngikhethe ngokukhethekile umatilasi we-latex wemvelo we-Simmons we-2600 yuan, omaphakathi ngobulukhuni futhi ofanelekile. amahhotela aphambili. Laba-ucezu embhedeni isethi kanye amathawula kanye okugeza amathawula ukwenza ukuhlala ekhaya njengoba ukhululekile nasekhaya.
Eduze neSibhedlela saseDonganshan, kunesitolo esikhulu iHaiqing Fresh Supermarket, indawo yokugeza, iJuli Pharmacy kanye nerestaurant esitezi esingezansi, kanti nesiteshi samabhasi silula kakhulu.